ကိုယ်၀န်ဆောင်မိခင် ခေါင်းကိုက်လျှင် - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လူတိုင်းခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ သူ့အလိုလို ပြန်ပျောက်တတ်သလို မပျောက်နိုင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လူတစ်ယောက် ခေါင်းကိုက်တာသိပ်အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ အသက်သေးသေးလေးတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းပေးထားရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက် ခေါင်းကိုက်ရင်တော့ ပြဿနာရှိပါပြီ။ ခေါင်းကိုက်စေမဲ့ အကြောင်းတွေ သိပ်များပေမဲ့ သက်သာပျောက်ကင်းစေမဲ့ ဆေးကတော့ ရှားပါတယ်။ ကလေးနဲ့ မတည့်တဲ့ဆေးတွေ များနေလို့ပါ။
?ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဘာလို့ ခေါင်းကိုက်လဲ ??
အဖြစ်များတဲ့ ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ အကြောင်းတွေကတော့
– ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ခြင်း
– သွေးထုထည်ပမာဏ ပိုများလာခြင်း
– စိတ်ဖိစီးမှု ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ မျက်လုံးပြဿနာ
– နှာစေးလွယ်..နှာပိတ်လွယ်..ထိပ်ကပ်နာဖြစ်လွယ်ခြင်းနဲ့ ပိုဆိုးစေခြင်းတို့ကြောင့် ခေါင်းနှင့်မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း
– သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကျဆင်းခြင်း
– အမြဲသောက်နေကျ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် မသောက်ရသည့်အတွက် ကဖင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း
– ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းကာလတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မူးခြင်း အန်ခြင်းကြောင့် ရေဓာတ်နည်းလာခြင်း
ဒါတွေကြောင့် ခေါင်းကိုက်တတ်သလို ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်လို့ သွေးတိုးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ခေါင်းကိုက်နိုင်တာ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။
Migraine ဆိုတဲ့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပိုထကြွလာတတ်ပါတယ်။
?ခေါင်းကိုက်ရင် ဘာလုပ်မလဲ ခေါင်းမကိုက်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲ ??
– အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ဆေးတွေကို ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲ မသောက်ဖို့ပါ။
ကလေးကို မထိခိုက်စေဖို့ သတိပြုပါ။
– တော်ရုံ ကိုက်ခဲတာဆိုရင်တော့ အစားမျှတအောင် စားပြီး အိပ်လိုက်ပါ။
– မနေနိုင်လောက်အောင် အရမ်းကိုက်နေရင်တော့ ဆရာဝန်ပြပါ။
– အချိန်မှန်အိပ် အချိန်မှန်စားပါ။
– ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်နဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ပါ။
– ရာသီဥတုကြောင့်လည်း ခေါင်းကိုက်တတ်လို့ နေပူမမိစေဖို့ အအေးမမိစေဖို့ မိုးရေမစိုစေဖို့ သတိပြုပါ။